Otu n'ime ekweisi ikuku ikuku anọ erere bụ AirPods | Esi m mac
Otu n’ime earbuds wireless anọ rere bụ AirPods
Ekweisi aghọwo otu n'ime kpakpando onyinye nke Christmas. Ma ọ bụghị naanị site na nnọkọ ndị gara aga, ma ọ bụrụ na ọ bụghị afọ mgbe niile n'afọ. Nke ahụ ma ọ bụrụ na, n'agbanyeghị ọnụahịa ya dị elu n'ihi teknụzụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ụdị ikuku. N'ime afọ ole na ole, ma e wezụga ụfọdụ, ndị ka n'ọnụ ọgụgụ agaghị enwe eriri ọ bụla.
Mana oge a, enwere “ọbịa” ọhụrụ n’ahịa na-emebi ọnụ ọgụgụ ahịa dị n’elu. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ekweisi ọhụrụ a bụ Apple AirPods ọhụrụ.
Dika nyocha emere n’oge na-adịbeghị anya nke onye na-ajụ ndị America mere, n’ahịa ụlọ 75% nke ahịa kemgbe wireless ụdị na ụbọchị Krismas, ma e jiri ya tụnyere 50% na 2015 maka ụbọchị ndị ahụ. Ruo ugbu a, Beats na-eduzi ahịa ahụ, ya na 24,1%, Bose na-esote.
Mana olee otu Apple na AirPods si emetụta ahịa a? Mgbe ọdịdị nke AirPods dị, 25% nke ekweisi ikuku na-ere bụ AirPods ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, onye kachasị tụfuo bụ onye ndu ahịa Beats, nke na-anọgide na 15%. Agbanyeghị, cheta na Apple nwetara Apple na Mee 2014, yabụ, lLọ ọrụ apụl maka 40% nke ahịa.
N'ụbọchị mbupute AirPods, Disemba 13, ahịa dị okpukpu iri karịa nke ụbọchị gara aga, karịa ahịa na Black Friday ma ọ bụ Cyber ​​Monday.
Otu nnyocha ahụ na-ekpughe nke ahụ 85% nke ndị na-azụ AirPods bụ ụmụ nwoke na 35% bụ Millennials na-eto eto. Maka ụmụ nwanyị zụrụ ekweisi, afọ nzụta dị elu, ebe 44% karịrị afọ 50.
N'ihi enweghị ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmentị, enweghị ike iji data ndị a tụnyere ezigbo data, ruo ugbu a anyị nwere naanị Nkwupụta nke Tim Cook na-egosi na ekweisi enweela nnukwu ọganiihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Otu n’ime earbuds wireless anọ rere bụ AirPods
Ike gwụrụ ka e gbubiri eriri ndị ahụ ... ugbu a, a ga-edozi onye na-akwụ ụgwọ ...
Zaghachi Roberto Enrique García Cabrera
Sal Soghoian na-ede blọgụ ugbu a
Gartner mere atụmatụ na Apple rere 5,4 nde Macs na nkeji nke anọ nke 2016